Overwatch Cross Platform? Fanavaozana farany (2020) - Lalao
Overwatch Cross Platform? Fanavaozana farany (2020)
Overwatch dia lozabe eo amin'ireo mpilalao hatramin'ny namoahana azy tamin'ny 2015.Noho izany dia takatra rehefa misy ny fitakiana fanohanana eo amin'ny sehatra hafa. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy azo inoana loatra ny Overwatch hanohana ny lalao cross-platform. Na izany aza, somary manantena ny Gamers amin'ny Overwatch 2.Overwatch dia mipetraka miaraka amin'ny lalao toa Fortnite, Call of Duty, izay rehetra misy lalao cross platform ecosystems an'ny fitaovana.
Na dia izany aza, na dia maro aza ireo mpankafy no diso fanantenana sy tezitra mafy amin'ny tsy fanohanan'ny crossplay an'ny Overwatch, Overwatch 2 dia hitondra ny lalao malaza miaraka amin'ny endrika ilain'ny tena ilaina sy ny fanatsarana azo antoka. Mila miandry hatramin'ny 2021 ireo mpilalao, saingy mampanantena ny Orinasa fa hanome ny fahafinaretana sy lalao tadiavin'ny mpankafy ary manantena ny hisarika mpilalao vaovao ary hanitatra ny Overwatch League bebe kokoa.
Azonao atao ve ny milalao fitaovana hafa ao amin'ny Overwatch?
Ny pejy ofisialy Blizzard dia nilaza fa ny mpilalao rehetra dia miaina amin'ny “ecosystems” samihafa momba ny Overwatch. Ka noho izany, ny sehatra fiampitana dia tsy tohanana.Ny talen'ny lalao Overwatch Jeff Kaplan dia nilaza fa tena mazoto ny ekipa ary mijery lalao miampita, indrindra momba ny Overwatch 2.
Nanambara ihany koa i Kaplan fa ny mpilalao Overwatch dia afaka milalao mpilalao Overwatch 2 amin'ny maody fifaninanana fototra raha vantany vao misy ny lalao crossplay, izay azo inoana fa ho an'ny taranaka faha-2 amin'ny lalao Overwatch.Ka ny hevitra iray manontolo momba ny lalao cross-platform an'ny Overwatch dia azo fehezina ao anatin'ny fe-potoana iray - tsy misy.
Inona no atao hoe Cross-Platform?
Misy taonina ny fitaovana filalaovana misy amin'ny internet. Sarotra amin'ny olon-drehetra ny fahazoana mampiasa fitaovana mitovy. Azonao atao ny manandrana safidy tena tsara amin'ny lalao overwatch. Cross-platform dia ahafahan'ny mpampiasa milalao miaraka amin'ireo mpandray anjara marobe. Ny ekipa mpamorona dia liana fatratra amin'ny lalao Cross-platform saingy mbola mijery ny fahafaha-manaony hita miharihary amin'ny firesahana tsy tambo isaina.
Miharihary fa ny Overwatch dia safidy malaza eo amin'ireo mpilalao, ary ny zava-misy fa tsy anohanana ny lalao miampita dia fijaliana goavambe ho an'ny ekipa Overwatch.Toy ny lalao tsara indrindra ao amin'ny sehatra misy azy io tsy manana ny endri-javatra tsara indrindra atolotra. Tena diso fanantenana nefa azo takarina noho ny antony miharihary.
Fomba hafa overwatch an'ny Cross-Platform:
Amin'ity fizarana ity dia hijery isika a lalao vitsivitsy azo soloina ho an'ny Overwatch. Ireo dia manolotra ny fanohanan'ny sehatra fiampitana ho an'ireo mpampiasa. Azonao atao ny manandrana azy anio ary mahazo traikefa tsy hay hadinoina. Ireto ny safidy.
Malalaka ny Paladins milalao lalao izay mitovy amin'ny Overwatch. Mihazakazaka amin'ny fitsipiky ny avatar sy ny endri-tsoratra ihany izy ireo. Afaka manandrana ireo anarana samihafa ireo mpampiasa ary miditra amin'ny ady.
Mahafinaritra nefa mifaninana amin'ny fotoana iray ihany. Hita amin'ny sehatra rehetra ny lalao. Izay rehetra amin'ny Internet dia afaka manandrana azy anio. Ny mpampiasa PC, PS4, ary Xbox One dia mandany ora maro amin'ity maimaim-poana ity hilalao shooter multiplayer.
2. Callzone adidy
Call of Duty Warzone no lalao Multiplayer farany misy amin'ny internet. Mety ho an'ny mpilalao PC sy console izy io. Mpampiasa maro no manandrana izany amin'ny traikefa nahafinaritra. Manoro hevitra anao izahay hijery izany anio.
Nandritra ny taona maro, nisy toe-javatra maro ahafahanao milalao amin'ny ady samihafa. Call of Duty Warzone dia afaka milalao ihany koa fa mampiasa ny endrika royale ady. Mampientam-po izy io, ary maro ny olona mankafy azy io.
Fortnite koa dia lalao maimaim-poana iray hafa milalao lalao ho an'ny mpampiasa. Afaka mankafy atiny tena tsara amin'ny vidiny mirary ianao. Tianay ny lalao maodely lehibe amin'ny alàlan'ity serivisy ity. Nandritra ny taona maro dia lasa iray amin'ireo fanantenana manitikitika indrindra ho antsika izy io. Ny lalao battle royale dia ahafahanao mifaninana amin'ireo mpilalao mihoatra ny 100+ mora foana.
Ny singa tsy manam-paharoa amin'ity lalao ity dia ny endriny sy ny rafitra fananganana. Tsy mitovy amin'ny Overwatch izy io fa miaraka amin'ny fanohanan'ny sehatra cross.Ireto ny sasany amin'ireo fanampiana azonao andramana. Multiplayer dia mety hahafinaritra sy mahaliana amin'ny alàlan'ireto lalao ireto. Manantena izahay fa manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namanao ianao amin'ireto safidy ireto. Hita amin'ny fitaovana samihafa izy rehetra.
Fa maninona no tsy Overwatch Cross-Platform?
Overwatch dia nanohitra ny fanohanan'ny crossplay hatramin'ny andro voalohany. Laharam-pahamehana lehibe ny ekôzistia filokana iray.Izy io dia traikefa gamerera miaraka miaraka amin'ny famerana. Ankoatr'izay, ny ecosystems cross-platform gaming rehetra dia mampifandray amin'ny Activision ID iray, izay midika fa azo atao koa ny mandroso.
Raha tsorina, ny zavatra rehetra dia mifamatotra amin'ny kaonty Activision iray, ka rehefa afaka miova ny sehatra, dia azo afindra mora foana ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaonty Activision tokana. Ka amin'ny ankapobeny dia tsy misy ifandraisany amin'ny sehatra. Afaka maka avy amin'ny toerana nijanonany ireo mpilalao.
Hanolotra fanohanana Cross-Platform ve ny taranaka ho avy?
Miharihary izao ny olana amin'ny Overwatch. Ny fivoaran'ny overwatch dia tsy misy fetra amin'ny kaonty ivelany.Izy io dia mifamatotra amin'ny serivisy an-tserasera na inona na inona an'io sehatra io nilalaovany, tohanany.Ny famindrana ny zava-drehetra mankany amin'ny kaonty ivelany dia mety hidika ho fahaverezan'ny fandrosoana amin'ny lalao.
Ho an'ny lalao dimy taona sy mifaninana be dia be, manomboka amin'ny ambaratonga voalohany dia tsy mandeha tsara.Ny fanantitranterana ny tontolo iainana ny lalao dia aleony eo amin'ireo mpilalao, kanefa dia fahadisoam-panantenana lehibe eo amin'ireo mpilalao marobe izany.Raha jerena fa ireo mpilalao avy amin'ny lalao tany am-boalohany sy ny tohiny dia ho afaka hilalao miaraka amin'ny maodin-dalao sasany dia manondro fa mampihatra rafi-pitadiavana fandrosoana ivelany i Blizzard.
Ary azonay antoka fa hahita ireo fampiharana rehetra ho an'ny Overwatch 2.
Olana amin'ny Cross-Platform amin'ny Overwatch:
Ivelan'ny olana ara-teknika dia misy sakana lehibe ho an'ny fanohanan'ny sehatra Overwatch: ny fitendry sy ny totozy.Ao amin'ny consoles, Overwatch dia manohana mpanara-maso ary amin'ny PC dia manohana kitendry sy totozy izy.Na eo aza ny fanohanana ny fidiran'ny keyboard sy ny totozy, tsy azon'ny mpilalao ampiasaina ity napetraka amin'ny PS4 na Xbox One ity.
Ny Gamers dia afaka mandany vola an-jatony dolara vitsivitsy amin'ny adaptatera, saingy tsy izany no fomba mety hivoahana.Ny overwatch dia tsy mamela ny lalao console hampiala zavatra hafa a -maso . Ho lasa henjana koa ny fifaninanana rehefa ovaina ny fitaovana.Ilay olona manana totozy sy fitendry dia mitondra tombony tsy rariny.
Inona no atao hoe Ligy tafahoatra?
Ny antony lehibe mahatonga an'io fijoroana io dia ny Overwatch League izay manamarina voalohany ny fahaiza-manao napetrak'ireo mpilalao tsirairay. Ny filalaovana matihanina dia resaka fahaiza-manao avokoa, ka ny tsy fitoviana no fanalahidy.Ny ekipa Overwatch dia nirehitra fatratra tamin'ny fitoviana amin'ny lalao sy ny zava-misy fa mamorona kianja ady ara-drariny sy ara-drariny hatramin'ny nanombohany.Ny fihazonana ireo fenitra rehetra ilaina amin'ny Esports Overwatch League dia fahombiazana lehibe, na eo aza ny tsy fahampian'ny fanohanana.
Na izany aza, tsy ny rehetra no mandray ny fijoroan'i Blizzard sy ny fanapahan-keviny amin'ny sehatra fanatanjahantena.Mamafana ny kaontiny ireo mpankafy, nanao diabe an-tongotra ny mpiasan'ny Blizzard, ary nanapaka ny fifamatorany tamin'ny Orinasa ireo mpitsikera. Ireo mpankafy dia nalaza tamin'ny #BoycottBlizzards.
Elaela ny mpilalao no namafa ny kaontiny sy nandoro ny kopian'ny lalao. Ny valin-kafatra dia goavana raha jerena fa ny Overwatch League no hany fifaninanana lehibe ho an'ny mpilalao Blizzards sy Overwatch. Ankehitriny i Blizzard dia manandrana maka antoka fa hitranga tsy ho ela ny lalao cross platform. Mety ho ao anatin'ny drafitra ho an'ny lalao manaraka.
Azontsika atao ny manazava mora foana fa ny Overwatch dia hijanona toy izao. Ny lalao dia tsy ho tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny sehatra cross ato ho ato. Afaka manana fanantenana be momba ny Overwatch 2 isika, ary afaka mankafy azy ireo mpilalao Overwatch raha vao mivoaka ny kinova faha-2. Azontsika atao ny manantena sy manantena taona iray ho avy ho an'ny ekipan'ny Blizzards amin'ny 2021. Ny ekipa dia mazoto ary manolo-tena amin'ny toerany.
Ny Overwatch 2 dia havoaka amin'ny 2021 ary manakaiky ny fanohanana ny sehatra ankehitriny. Kaplan dia manana fanantenana be amin'izany. Ny orinasa dia namoaka lalao niaraka tamin'ny Call of Duty: Modern Warfare miaraka amin'ny fanohanana crossplay. Ka ny orin'asa dia afaka manome ekôzistia lakroa. Miaraka amin'ny Overwatch, mampalahelo fotsiny sy takatry ny saina tokoa izany noho ny traikefa sy ny famoronana andrasan'ny orinasa avy aminy.
RTX 2080 vs GTX 1080 - Iza no tsara indrindra amin'ny lalao?
Iza moa i Paul Wesley mampiaraka? Feno & Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Mety hiverina amin'ny taona 2022 ve ny Kung Fu Panda 4?
mijery hery an-tserasera streaming maimaim-poana
tsy misy fanadihadiana xbox mpamorona kaody mivantana miasa
Anime hafahafa an'i jojo an-tserasera
dia ny fomba tokan-tena amin'ny amazon prime
ny fomba fanakatonana ny fampiharana mandeha amin'ny iphone